युगबोध | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / Author Archives: युगबोध
Author Archives: युगबोध
राष्ट्रिय दिवसको रुपमा संविधान दिवस, मुलुकले काँचुली फेर्छ, गति रोकिदैनः प्रधानमन्त्री
26 mins ago	09Views
युगबोध समाचारदाता काठमाडौं । संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रवार मुलुकभर आपसमा खुशियाली साटेर संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइएको छ। यो वर्षदेखि सरकारले संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। अब हरेक ...
लागूऔषधका बन्दीले भरिएको कारागार
37 mins ago	02Views
कुमार श्रेष्ठ बाके । नेपालगञ्ज कारागार लागूऔषधका थुनुवाले भरिएको छ। कारागारमा अहिले सात सय ४६ जना बन्दी रहेका छन्। कारागारको क्षमता भन्दा तेब्बर बन्दी भइसकेका छन्। नेपालगञ्ज कारागारको क्षमता दुई सय पचास जनाको हो। अहिले त्यहा लागूऔषधकै दुई सय ६७ ...
‘साझा पहलबाटै संविधान कार्यान्वयन’
39 mins ago	09Views
निमुसंगम घर्ती घोराही। प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डागीले साझा पहलबाटै संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ। दिवस मूल समारोह समिति दाङले शुक्रवार घोराहीमा आयोजना गरेको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य डागीले संविधानले सबै वर्ग, समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको ...
40 mins ago	02Views
युगबोध समाचारदाता देउखुरी। संविधान संशोधनको माग राख्दै संघर्षमा रहेका थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी छाडेको छ। संविधान दिवसको दिन संविधानका धारा तथा अनुसूची जलाएको अभियोगमा समितिका छजना कार्यकर्ता शुक्रवार दिउ“सो पक्राउ परेका थिए। लमहीमा कालोपट्टी बा“धेर संविधानको ...
41 mins ago	02Views
युुगबोध समाचारदाता घोराही। विद्यार्थी बालबालिकाहरुको मनोविज्ञानमा असर नपार्ने गरी शिक्षण सिकाइ उपलब्धिलाई बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को सहयोग तथा बाल विकास माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा शुुक्रवार घोराहीमा एकदिने मनोवैज्ञानिक तालिम सम्पन्न भएको छ। बाल विकास माविका ...
ज्ञानसिन्धुमा विद्यार्थीको स्वागत र विदाइ
43 mins ago	0 1 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही । ज्ञानसिन्धु मावि घोराहीमा कक्षा १२ का विद्यार्थीले कक्षा ११ का नया“ विद्यार्थीलाई स्वागत गरेका छन् भने कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाइ गरेका छन्। उनीहरुले शुक्रवार संविधान दिवसका अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरी स्वागत र विदाइ गरेका ...
संविधान दिवस : प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
44 mins ago	07Views
युगबोध समाचारदाता देउखुरी। देउखुरीमा संविधान दिवस २०७६ का अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। स्थानीय तहले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाएका हुन्। लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर र राप्ती गाउ“पालिकाले प्रभातफेरि आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाएका छन्। लमही नगरपालिकाले शुक्रवार ...
चार हजार बिक्री गर्ने लक्ष
48 mins ago	00Views
दशरथ घिमिरे देउखुरी। भारतबाट खसी बोका ल्याउन रोक लगाएपछि स्थानीय खसी बोकाले बजार र मूल्य दुबै पाउने भएका छन्। भारतीय खसी आयातमा रोक लगाएपछि स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका खसी–बोकाको मूल्य बढाइएको छ। दशैं तिहार आउदै गर्दा दाङ, प्युठान र कर्णाली प्रदेशको ...
घोराही खानेपानीमा डिपिआर शुरु, ५० करोड लगानी गर्न सकिने
54 mins ago	0 1 Views
गोविन्द खड्का घोराही। घोराही खानेपानीको क्षेत्र विस्तार र स्रोत बृद्धिका लागि शुक्रवारदेखि डिपिआर शुरु भएको छ। बबई लिफ्टिङ र कटुवाखोला ड्याम निर्माण गरी खानेपानी विस्तार गरिने भएको छ। घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसीको अध्यक्षता एवं घोराही ...
शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै प्युठान नगरपालिका
55 mins ago	0 1 Views
सागर रिजाल प्युठान। प्युठानका नौवटा स्थानीय तहमध्ये प्युठान नगरपालिका एक हो। प्युठान नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अरु विकास निर्माणका कार्यस“गै शिक्षालाई प्राथमिकता दिइ अगाडि बढेको छ। प्युठान नगरपालिकाले तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना समेत निर्माण गरेको छ । शिक्षालाई विशेषरुपमा ...
Page 1 of 4,09012345»102030...Last »